kunming.cn - ၂၀၁၇ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ မူဆယ် တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီ နိုင်ငံတကာအဆင့် မာရသွန် အပြေးပြိုင်ပွဲကို ကျင်းပ
၂၀၁၇ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ မူဆယ် တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီ နိုင်ငံတကာအဆင့် မာရသွန် အပြေးပြိုင်ပွဲကို ကျင်းပ
2018-01-01 14:13 ရောင်စုံတိမ်တံတား
(ရောင်စုံတိမ်တံတား၊ လဲ့ရွှေရည်) ၂၀၁၇ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ မူဆယ် တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီ နိုင်ငံတကာအဆင့် မာရသွန် အပြေးပြိုင်ပွဲကို ၁၂လပိုင်း ၃၁ရကိနေ့ မနက်ပိုင်း ၉နာရီတွင် တယ်ဟုန် ရှမ်းလူမျိုးနှင့် ကျင်ဖော်လူမျိုး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ပြည်နယ်ခွဲ ရွှေလီမြို့ ကျယ်ကောက် ယဉ်ကျေးမှု ကွင်းပြင်၌ စတင်ကျင်းပ ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် ရွှေလီမြို့သည် ပထမအကြိမ် တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီ ကျန်းမာရေး မရသွန် အပြေးပြိုင်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်၊ ၂၀၁၇ခုနှစ် နိုင်ငံတကာအဆင့် မာရသွန် အပြေးပြိုင်ပွဲသည် ၂၀၁၆ခုနှစ် အခြေခံပြုပြီး “ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်ခု” အဆိုတင်သွင်းချက်ကို တုံ့ပြန်၍ တရုတ်မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအတွက် “မာရသွန် တစ်ခု နှစ်နိုင်ငံကျော်” ပြိုင်ပွဲကို ဖြစ်၍ တရုတ်ပြည်တွင်း ပထမဦးဆုံး နယ်ကျော် နိုင်ငံတကာအဆင့် မာရသွန် အပြေးပြိုင်ပွဲကိုလည်း ဖြစ်လာပါသည်။
ဤအကြိမ် မရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲသည် အပြေးပြိုင်ပွဲ (၄)မျိုးကို ခွဲခြား၍ မာရသွန်(၄၂.၁၉၅ ကီလိုမီတာ)၊ ထက်ဝက်မာရသွန် (၂၁.၀၉၇၅ ကီလိုမီတာ)၊ လက်ဆွေ့လေ့လာခံစားခြင်း အပြေးပြိုင်ပွဲ (၈ ကီလိုမီတာ)၊ မိဘနှင့် ကလေး အပြေးပြိုင်ပွဲ (၂ ကီလိုမီတာ) ပါဝင်ပါသည်။ မိဘနှင့် ကလေး အပြေးပြိုင်ပွဲမှလွဲ၍ အပြေးပြိုင်ပွဲ (၃)မျိုးသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ပြေးလမ်းသည် (၄.၂)ကီလိုမီတာ ရှည်ပါသည်။
၁၂လပိုင်း ၃၁ရက်နေ့အထိ၊ နိုင်ငံ(၁၆)ခုမှလာသော လက်ရွေးစင် အားကစားသမား (၇၅၀၈)ယောက်သည် ဤအကြိမ်ပြိုင်ပွဲကို ပါဝင်လာပါသည်၊ ၎င်းအနက်၊ မာရသွန်၊ ထက်ဝက်မာရသွန်၊ (၈)ကီလိုမီတာ အပြေးပြိုင်ပွဲကို တရုတ် အားကစားသမား (၄၄၃၃)ယောက်၊ မြန်မာ အားကစားသမား (၄၈၁)ယောက်နှင့် တခြားနိုင်ငံ အားကစားသမား (၂၆)ယောက်သည် ပါဝင်လာပါသည်။ (၂ ကီလိုမီတာ) မိဘနှင့် ကလေး အပြေးပြိုင်ပွဲကို မိသားစု (၁၂၈၄)ခု၊ လူကြီးနှင့် လူငယ်(၂၅၆၈)ယောက် တို့သည် ပါဝင် လာပါသည်။
လက်ရွေးစင် အားကစားသမားများသည် ကျယ်ကောက် ယဉ်ကျေးမှု ကွင်းပြင်မှ စတင်ထွက်ပြေး၍ ရွှေလီ နယ်စပ်ဂိတ် အပေါက်ဝ၊ မြန်မာမူဆယ်ကို ဖြတ်ကျော်၍ ကျယ်ကောက် နယ်စပ်ဂိတ် အပေါက်ဝသေး၊ ကျယ်ကောက်တံတားကြီး၊ ရွှေလီဖြစ်ကွင်းပင်၊ ရွှေလီမြို့တွင်းဒေသများသို့ ပြန်လာပါသည်။ မာရသွန်နှင့် ထက်ဝက်မာရသွန်တို့၏ ပန်းတိုင်သည် ရွှေလီမြို့ နုံမော်ကန်ဥယျာဉ်၌ တည်ရှိ၍ (၈)ကီလိုမီတာ လက်ဆွေ့ လေ့လာ ခံစားခြင်း အပြေးပြိုင်ပွဲ၏ ပန်းတိုင်သည် ကျယ်ကောက် ယဉ်ကျေးမှုကွင်းပြင်၌ တည်ရှိ ပါသည်။
အပြေးပြိုင်ပွဲ၏ ဆုငွေသည် အလွန်များပြား၍ မာရသွန် အပြေးပြိုင်ပွဲ၏ ပထမဆုသည် အချိန်ကုန် ၂နာရီ ၉မိနစ် ၃၀စက္ကန့်ကို မကျော်လွန်လျှင် ဆုငွေ အယွမ်(၂)သောင်း ရနိုင်၍ ကျောလွန်လျှင် အယွမ်(၁)သောင်း ရနိုင်ပါသည်။ ဒုတိယဆုသည် ဆုငွေ အယွမ်(၈)ထောင် ရနိုင်၍ တတိယဆုသည် အယွမ်(၆)ထောင် ရနိုင်၍ မာရသွန် အပြေးပြိုင်ပွဲ၏ နဝမမှ (၅၀)ဦးမြောက်တွင် တည်ရှိသော အားကစားသမား များသည်လည်း အယွမ်(၅)ရာ ရနိုင်ပါသည်။
ဤအကြိမ် အပြေးပြိုင်ပွဲကို တရုတ်ပြေးခုန်ပစ် အသင်း၊ မြန်မာ အားကစားနှင့် ပညာရေး ဦးစီးဌာန၊ ယူနန်ပြည်နယ် အားကစားဌာန၊ မြန်မာပြေးခုန်ပစ် အသင်း၊ တယ်ဟုန်ပြည်နယ်ခွဲ ပြည်သူ့အစိုးရ၊ မြန်မာမူဆယ်မြို့နယ်အစိုးရ၊ ပြည်သူ့သတင်းဌာန တို့သည် အတူတူ ဦးစီးကျင်းပ၍ ရွှေလီမြို့ပြည်သူ့အစိုးရ၊ မြန်မာမူဆယ်မြို့နယ်အစိုးရ၊ ရှန်းကျန့်ဟွာတ အားကစား လိမိတက်ကုမ္ပဏီ တို့သည် အတူတူ တာဝန်ယူလုပ်ဆောင် ပါသည်။
2018年01月01日 14:13 昆明信息港-彩云桥
昆明信息港 记者江枫 文丽荣 12月31日上午9点，2017中缅瑞丽—木姐（中国瑞丽—缅甸木姐）国际马拉松赛在德宏州瑞丽市姐告文化广场鸣枪开跑。据了解，瑞丽市去年成功举办了首届中国瑞丽健康马拉松赛，今年的比赛，在去年的基础上响应“一带一路”倡议，扩展为中缅两国真正意义上的“一马跑两国”比赛，也是国内首个跨境国际马拉松赛事。
本次马拉松设置四个竞赛项目，分别为42. 195公里全程马拉松、21. 0975公里半程马拉松，8公里体验跑和2公里亲子跑。除2公里亲子跑以外，其他三个项目均涉及缅方4. 2公里赛段。